सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नागरिक समाजको माग - Morning Bell
३१ वैशाख २०७८, शुक्रवार
Reporter	काठमाडौं	फागुन ११, २०७७
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस आज बदर गरेपछि बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील भएको छ । विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनको आज फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्नसमेत आदेश सर्वसम्मत रुपमै दिएको छ ।
फैसला सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि संसद फेस गर्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलाशले यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । सर्वाेच्चको यो फैसलासँग प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङका हल्लापनि गलत सावित भएको छ ।
सर्वाेच्चको फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै नागरिक समाजले ओली र राष्ट्रपति दुबैजनाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।राजनीतिक टिप्पणीकार पुरञ्जन आचार्यका अनुसार, अब पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा बस्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।
तर प्रधानमन्त्री ओली भने अझैपनि संसद फेस गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
फैसला लगत्तै राजनीतिक वृत्तबाट समेत प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले फैसला ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ ।नेताहरुले फैसलाले संविधान र प्रजातन्त्र जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर ओली पक्षले भने फैसलाबारे औपचारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
यद्यपि ओली पक्ष अब के गर्ने भनेर बालुवाटारमा रणनीति बनाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर नेताहरुले भने फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायत नेताहरुले फैसलाले लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काएको भन्दै सर्वाेच्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको धारणा राखेका छन् ।
११ फागुन २०७७, मंगलवार १९:२० बजे प्रकाशित
नेपाली जनताको जित भयो : प्रचण्ड
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्यको जित : रामचन्द्र पौडेल
प्रि-मनसुन कमजोर, कस्तो रहला आजको मौसम ?
ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त
धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा मेयर कल्याणकारी कोष स्थापना
आत्मसमर्पणले कम्युनिस्‍ट आन्दोलन विसर्जन गर्छ, सचेत बनौँ: रामकुमारी झाँक्री
कोरोना संक्रमणबाट थप २१४ जनाको मृत्यु, ८९६० संक्रमित थपिए
समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी केन्द्र, प्रधानमन्त्रीको यस्तो तयारी
मासु खाएपछि एक्कसी बिरामी परेका वडाध्यक्ष चन्दको निधन
भागरथी भट्ट हत्या प्रकरण : अभियुक्त दिनेशले फेरे बयान